Andiana 1270 Dragon® Dredge - Dredge Ellicott
Ity dredge cutterhead marobe ity dia manome taham-pamokarana tena tsara ho an'ny halalin'ny dredging hatramin'ny 50 '(15 m). Amin'ny habe ara-batana antonony sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso tsotra sy mivantana dia mora ny fampiofanana.
Ny dredge 1270® Dragon® dia dredge antonony izay matetika ampiasaina amin'ny seranana, seranan-tsambo, renirano, ary tetik'asa fanadiovana ny làlambe anaty rano, ary koa ny famerenana amin'ny laoniny ny morontsiraka, ny fanavotana ny tany, ny fananganana nosy ary ny fanaraha-maso ny tondra-drano.
Ny famolavolana Compact dia mamela ny fametrahana haingana sy ny fanentanana. Ara-dalàna ny fitarihana sy fanodikodinana ny faritra voafetra.
Ampiasaina amin'ny motera diesel roa misaraka, ny iray amin'izy ireo dia natokana ho an'ny paompy dredge ho an'ny famokarana tsara indrindra.
Ny famokarana dredge amin'ny faritra misy dredging voafetra dia mety hitombo be miaraka amin'ny endri-pitaterana fiara fitaterana safidy.
Hizaha habe: 18 ″ x 18 ″ (450 mm x 450 mm)
Caterpillar C 32 : 800 HP (597 kW)
Enina mpanampy Caterpillar C 9 : 375 HP (280 kW)